राती साथीको कोठामा पुगेकी यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने ! | समाचार
राती साथीको कोठामा पुगेकी यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने !
June 15, 2021 NepstokLeaveaComment on राती साथीको कोठामा पुगेकी यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने !
काठमाडौं। एक १९ वर्षकी किशोरीले दावी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अचानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले करणी गरे । घटना साइप्रसको हो, जहाँ बेलायती कशोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । किशोरीले आफू एक युवकसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् ।
किशोरीको उजुरीपछि सबै १२ जना युवकविरुद्ध करणीको मुद्दा चलाइएको छ । आरोपी सबै युवकहरु इजरायलका हुन् । किशोरीका अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छोडेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं निशान पाइएका छन् । किशोरी साइप्रसको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होटलमा बसेकी थिइन् ।
घटना होटलको दोस्रो तलाको त्यो कोठामा भयो जहाँ इजरायली युवक आफ्ना दुई साथीहरुसँग बसेका थिए । किशोरीका अनुसार रातको १ बजेसम्म ती युवकहरुले उनलाई छोडेनन् । किशोरीका अनुसार उनले आफूसँग सुरुमा भएका युवकसँग भने शा’रीरिक सम्बनध बनाइसकेकी थिइन् ।
पुलिसले सबै युवकहरुलाई पक्राउ गरेको छ । युवकहरुलाई बिहीबार अदालतमा पेश गरियो । पुलिसले डिएनएको जाँच रिपोर्ट पर्खिरहेको छ । स्थानीय मिडियामा एक युवक र पीडित युवतीको इन्स्टाग्राम म्यासेज पनि प्रकाशित गरिएको छ । पुलिसका अनुसार किशोरी नयाँ होटलमा सरेकी छिन् र उनलाई काउन्सिलरको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । बेलायती दूतावासले पनि किशोरीसँग सम्पर्क गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : सुतिरहेकी महिलालाई विमानभित्रै छोडेर गए चालक दलका सबै सदस्य, एयरलाइन्सले माग्यो माफी
एयर क्यानडाकी एक यात्रीले चालक दलका सदस्यको गल्तीका कारण निकै खराब अनुभवबाट गुज्रनु पर्यो । महिला क्यूबिकबाट पियर्सन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जाँदै थिइन् । विमानले उडान भरेपछि ती महिला निदाइन् । जब उनको आँखा खोलियो तब विमानभित्र पूरा अँध्यारो थियो । त्यहाँ न यात्री थिए, न चालक चलका सदस्य । विमान पार्किङ एरियामा थियो । यो पूरा घटनाक्रम महिलाका एक साथीको फेसबुक पोष्टमार्फत् सोमबार चर्चामा आयो । एयरलाइन्सले यो घटनामाथि खेद जताएको छ ।
एमएसएन न्यूजका अनुसार टिफनी एडम्सले यो महिनाको सुरुमा उक्त विमानमा गरेको यात्राबारे आफ्नी साथीलाई बताएकी थिइन् । उनकी साथीले एयर क्यानडाको फेसबुक पेजमा यसबारे जानकारी दिइन् । उनले लेखिन्, ‘यात्राको क्रममा एडमको फोनको ब्याट्रि पनि सिद्धियो । यो उनका लागि एउटा खराब सपनाजस्तो थियो ।
आखिर यस्तो कसरी हुनसक्छ भनेर उनी सोचिरहेकी थिइन् । उनी राम्रोसँग सास फेर्न र आफूलाई प्या’निक अ’ट्याकबाट बचाउने कोसिस गरिरहेकी थिइन् । एडमले त्यहाँ भएको हरेक युएसबी पोर्टबाट आफ्नो फोन चार्ज गर्ने कोसिस गरिन् तर विमानको बिजुली बन्द भएका कारण उनले यस्तो गर्न सकिनन् ।
एडमका अनुसार ककपिटमा एउटा टर्च भेटेपछि उनी विमानको ढोका खोल्न सफल भइन् । तर ढोका जमिनभन्दा करिब ५० फिट माथि भएको देखिन् । यस्तो स्थितीमा उनले टर्चबाट समान ल्याउने गाडीका ड्राइभरको ध्यान आफूतर्फ खिचिन् । ती ड्राइभरले एडमलाई विमानबाट निकाल्न मद्दत गरे ।
एडमले ड्राइभरले पनि आफूलाई देखेर चकित भएको बताइन् । विमानका चालक दलका सदस्यले एक्ली महिला यात्रीलाई कसरी एक्लै छोड्न सकेको होला भनेर उनीहरुबीच चर्चा भयो । एयर क्यानडाले यो घटनाका लागि माफी मागेको छ ।
यसबारे एडमले भनिन्, ‘यो घटनापछि म निदाउन सकिरहेको छ । सुत्न खोज्दा झसङ्ग ब्युँझिने गर्छु ।’एयर क्यानडाले सिटिभी न्यूजसँग भन्यो, ‘हामी यो मामलामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी जानकारी दिन सकिँदैन ।’
सुनसान जंगलमा आफूलाई चेनमा ताल्चा लगाएर रुखमा बाँधे, निस्कन सकेनन्ः दुई वर्षपछि भेटियो कंकाल
हाकिम गए आफ्नै महिला कर्मचारी लिएर मस्ती गर्न, फर्केर आउँदा जागिर चट
कुबेतमा को,रोनाका कारण एकसाथ १२ जना नेपालीको मृ*त्यु ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली(R.I.P 😭😭)
June 5, 2021 Nepstok
नर्सहरुको चित्कार : बिरामीको पिडाले मन थाम्न गाह्रो भो – बिरामीलाई अक्सिजन देउ बरु हामीलाई भत्ता चाहिदैन !
May 16, 2021 May 16, 2021 Nepstok
चितामा आगो झोस्दा शकुन्तला रुँदै उठेपछि…
May 22, 2021 May 22, 2021 Nepstok